China Isilivere camera spandex conductive / uvikele amalaphu abavelisi kunye nabathengisi | 3L isicatshulwa
Ubunzima: 110g ± 5g
Unyango olukhoyo: Unyango lwe-anti-oxidation
Min.Order Ubungakanani: I-120M
Iimpawu eziphambili: Ukuxhathisa okuphantsi kakhulu, ukukhusela amaza ombane, anti-radiation, antibacterial, deodorant (inkunkuma), ukuphelisa umbane ongashukumiyo, ukuvuselela izihlunu, ukulawula ubushushu bomzimba, i-anti-UV, ukuluhlaza kwendalo, ukungena okuphezulu komoya
Isilivere esicocekileyo i-polyamide spandex yengubo
Olona luvo luhamba phambili lokuzikhusela kunye nemisebenzi ye-antibacterial, isilivere egalelwe izinto ezisisiseko ze-polyamide / nylon spandex, inxiba ngakumbi, iyolula, ithambile kwaye intofontofo. Yimveliso yobuchwephesha obuphezulu efunyenwe ngokudibanisa isigxina sesilivere kwinto yenayiloni kusetyenziswa ubuchwephesha obukhethekileyo. Olu lwakhiwo alwenzi nje ukuba ifayibha yesilivere igcine impahla yepropathi yoqobo, kodwa ikwanika wonke umsebenzi womlingo, isiphumo sesilivere. Njengempahla yendalo, isilivere isempilweni ngokupheleleyo, okusingqongileyo / eluhlaza kunye nokugcina.
Uphawu Main: Ukuxhathisa okuphantsi kakhulu, ukukhusela amaza ombane, anti-radiation, antibacterial, deodorant (inkunkuma), ukuphelisa umbane ongashukumiyo, ukuvuselela izihlunu, ukumisela ubushushu bomzimba, i-anti-UV, ukuluhlaza kwendalo, ukuvuleka komoya ophezulu, ukutsha / ukuphinda kusetyenziswe kwakhona. , ukusebenza okuphezulu kokukhusela.
Main Izicelo: Izinto ezifanelekileyo zokukhusela, i-anti-radiation, iimpahla zangaphantsi ezifanelekileyo, iimpahla, izinto ezincedisayo kunye namalaphu asekhaya, iimpahla zokulwa neebacteria, iimaski, iiglavu kunye namalaphu ekhaya, iimveliso zonyango, ezemidlalo, ukuzuza kwezihlunu, iimveliso ezizihambisayo, iimveliso ezichasayo.
Uluhlu lokuhamba rhoqo kunye ukusebenza ngokukhusela:
Umgaqo wokukhusela umbane ongachazwanga ngombane
Antibacterial Iindidi: iintsholongwane ezosuleleke ngumatshini wokuphefumla - ICovid-19, iH1N1, Umkhuhlane, candida albicans, staphylococcus Aureus, eschenchia coliform njl.
Imigaqo: Ilaphu lesilivere likhupha ion zesilivere eziza kuthatha iproteni ye-enzyme kumphezulu webhaktiriya kunye nezinye iintsholongwane, ngaloo ndlela kutshabalalisa ukwakheka kwebhaktheriya, kuchaphazela ukusinda kwayo, kunye nokufezekisa injongo ye-antibacterial.
Iion zesilivere zinokubulala i-99.99% yeentsholongwane ezosuleleke ngumatshini wokuphefumla, iCovid-19, H1N1, umkhuhlane ngemizuzu. Iziphumo zovavanyo ezivela kwi-Institute of Microbiology and Epidemiology of the Academy of Military Medical Sciences zibonisa ukuba ilaphu le-antiviral linokubulala okanye licinezele umkhuhlane A kunye neentsholongwane zomkhuhlane ngexesha elifutshane.
Mnaphucula ukujikeleza kwegazi: Ifayibha yesilivere inokukhuthaza ukuhanjiswa kwe-microcirculation, ukufuma kunye nokubila, kunokuphucula ukujikeleza kwegazi. Iikawusi zonyango ezinokuphefumla, idolo, amabhanti (Kwimithambo ye-Varicose, isifo seswekile, isifo samathambo)
Ukukhuthaza izihlunu: ye ukunyusa i-electrode yonyango, ukukhuthaza izihlunu ukuba sempilweni.
Ismart /isivamvo ekrelekrele Produts:
Ngobuntununtunu obuphezulu kakhulu, ilaphu lethu lesilivere lisetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso zoluvo ezikrelekrele, iimpahla zangaphantsi ezifanelekileyo, iimpahla, izinto zokusebenza kunye namalaphu asekhaya.
Egqithileyo Ipholiyesta yeTaffeta yepeyinti Ilaphu leCopper eliQhelayo
Okulandelayo: Isilivere camera polyamide conductive / ukukhusela ilaphu
Isilivere isongelwe ngokuhambisa / ukukhusela ilaphu
Isilivere isongelwe ngokuhambisa / ukukhusela umnatha
Iziqhano zeSilver (antibacterial / kill virus)